Google विश्लेषक अभियान ट्र्याकिंग Hootsuite मा कसरी जोड्ने » Martech Zone
हिजो हामीले घोषणा गर्यौं DK New Media नाम राखिएको थियो Hootsuite समाधान पार्टनर। हामी सबै प्रयोग गर्दै आएका छौं Hootsuite प्रो केहि बर्षको लागि खाता र निरन्तर सुविधाहरू र लचिलोपन यो हाम्रो टीम प्रदान गरिरहेको छ मनपर्छ। र ... यो अधिक सामाजिक प्रकाशन इञ्जिनहरूको लागतको एक अंशमा छ।
हामी हाम्रा सबै क्लाइन्टहरूलाई उनीहरूको लिंकहरू पोष्ट गर्ने क्रममा पूरै लाभ उठाने अभियान ट्र्याकि to गर्न धकेल्दै छौं Hootsuite। धेरै व्यक्तिहरूले सोच्दछन् कि ती म्यानुअल रूपमा URL क्वेस्टस्ट्रिंग लेख्न आवश्यक छ - तर Hootsuite वास्तवमा आवश्यक अभियान ट्र्याकिंग जानकारी थप्नको लागि एक धेरै राम्रो इन्टरफेस प्रदान गर्दछ।
अभियान क्वेरीस्ट्रिंग para प्यारामिटरहरू मिलेर बनेको छ:
अभियान स्रोत (utm_source) - एक आवश्यक प्यारामिटर। खोज इंजिन, न्यूजलेटर नाम, वा अन्य स्रोत पहिचान गर्न utm_source प्रयोग गर्नुहोस्। उदाहरण: utm_source = गुगल
अभियान मध्यम (utm_medium) - एक आवश्यक प्यारामिटर। Utm_medium को उपयोग गरी एक मध्यम पहिचान गर्न को लागी ईमेल वा लागत-क्लिक -। उदाहरण: utm_medium = cpc
अभियान अवधि (utm_term) - एक वैकल्पिक प्यारामिटर। भुक्तान गरिएको खोजीको लागि प्रयोग गरिएको। यस विज्ञापनको लागि कुञ्जी शब्दहरू नोट गर्न utm_term प्रयोग गर्नुहोस्।
उदाहरण: utm_term = चलिरहेको + जुत्ता
अभियान सामग्री (utm_contete) - एक वैकल्पिक प्यारामिटर। A / B परीक्षण र सामग्री-लक्षित विज्ञापनको लागि प्रयोग गरीयो। उही यूआरएलमा देखाउने विज्ञापन वा लि links्कहरू छुट्याउन utm_content प्रयोग गर्नुहोस्। उदाहरण: utm_content = logolink or utm_content = Textlink
अभियान नाम (utm_cam अभियान) - एक वैकल्पिक प्यारामिटर। कीवर्ड विश्लेषणको लागि प्रयोग गरिएको। विशिष्ट उत्पाद पदोन्नति वा रणनीतिक अभियान पहिचान गर्न utm_camp अभियान प्रयोग गर्नुहोस्। उदाहरण: utm_camp अभियान = वसंत_सेले
यहाँ एक क्लोज-अप छ जहाँ हामीले URL सेट अप गरेका छौं गुगल एनालिटिक्स अभियान ट्र्याकिंग। यदि तपाईं वैकल्पिक बक्स जाँच गर्नुहुन्छ, तपाईंसँग यो सँधै प्रत्येक URL मा अभियान ट्र्याकिंग थप्न सक्नुहुन्छ। यो खराब विचार होईन ... र तपाईंलाई बाह्य साइटहरूको रडारमा ल्याउन सक्छ जुन तपाईं धेरै धेरै रेफरल ट्राफिक पठाउँदै हुनुहुन्छ।
जब तपाईं लि URL्क क्षेत्रमा तपाईंको यूआरएल प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, तपाईंले एउटा यस्तो गियर देख्नुहुनेछ जुन तपाईं अभियान ट्र्याकि add थप्न उन्नत क्षेत्रहरू ड्रप गर्न क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिसेटहरू मध्ये एक पहिले नै गुगल एनालिटिक्स हो। यदि तपाईं अर्को वेब प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ विश्लेषण प्लेटफर्म, तपाईं सजीलै यहाँ आफ्नै presets थप्न सक्नुहुन्छ!
हामी यहाँ अझ धेरै सल्लाह र युक्तिहरू साझेदारी गर्दै छौं कसरी पूर्ण लाभ उठाउन सकिन्छ Hootsuite प्रो तपाईंको कर्पोरेट सोशल मीडिया रणनीतिहरूको लागि। खुलासा: हामी सम्बद्ध लि sharing्कहरू साझेदारी पनि गर्दछौं जब हामी यी लेखहरू पोस्ट गर्दछौं।
टैग: विश्लेषणात्मक ट्र्याकिंगअभियान ट्र्याकिंगGoogle विश्लेषणhootsuite
भेरासिटी टेक्नोलोजीहरू LLC
मई 24, 2012 मा 7: 34 एएम
यो महान लेख को लागी धन्यवाद! म यी सुझावहरूको बारेमा सिक्न साँच्चै मजा लिन्छु!